“Angazi ngifake bani ngiyeke bani emdlalweni wethu ne Egypt”: Stuart Baxter – Sivubela intuthuko Newspaper
UMqeqeshi we Bafana Bafana u Stuart Baxter kulindeleke ukuthi abophele okokugcina emdlalweni obhekwe ngamehlo abomvu abazowudlala ne Egypt engosokhaya be Africa Cup of Nations.
I Bafana izobhekana ngeziqu zamehlo ne Egypt ngoMgqibelo mhlaka 6 ku Julayi. Ekhuluma ne South African Football Association, u Baxter uchaze ngemicabango yakhe ejulile ngabadlali abangu 11 azobe egabe ngabo uma kuqala umdlalo.
“Ukukhetha iqembu ozoqala ngalo kuhlezi kungumzukuzuku, ikakhulukazi kimina kanye nakubalandeli ngoba imibono ayifani. Uma nginganika noma imuphi umqeqeshi osezingeni le PSL ithuba lokwethula uhlu angaqala ngalo kungaba ngokwehlukile kunami ngoba imibono ayifani. Kuleli zinga, yimina umuntu osendaweni yokusiqonda kangcono isimo mqondo nesimo mpilo sabadlali engibabophele ,” kuchaza u Baxter.
U Baxter uqhube wathi icebo lisamile,nohlelo lokubheka imbangi lusamile. Uthe akukho okuningi azokushintsha eqenjini azolibophela, kodwa angazenza izinguquko phakathi nomdlalo uma ebona ukuthi sikhona isidingo.
“Sizoqhubeka sisebenzise indlela efanayo nekade sidlala ngayo, sizobheka izinga izimbangi zethu ezidlala ngalo bese siqale lapho ke ukwenza izinguquko uma kufanele,” kusho u Baxter.
Uqhube wathi uzoqhubeka asebenzise abadlali abasefomini: “Kukhona abadlali esinabo abasefomini, sizoqhubeka sibasebenzise bese kuthi lapho kumele senze khona izinguquko bese siyazenza, kodwa akukabi yisikhathi esifanele ukuqagula ngezinguquko esizozenza.”